WTTC: Ny fitsangatsanganana ara-barotra dia hahatratra roa ampahatelon'ny ambaratonga alohan'ny areti-mifindra amin'ny taona 2022
Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-trano » WTTC: Ny fitsangatsanganana ara-barotra dia hahatratra roa ampahatelon'ny ambaratonga alohan'ny areti-mifindra amin'ny taona 2022
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News
Ny fandaniana amin'ny fitsangatsanganana ara-barotra dia antenaina hahatratra roa ampahatelon'ny haavon'ny pre-pandemic amin'ny 2022.
Araka ny tatitra vaovao, ny fampisondrotana tsotsotra ho an'ny fitsangatsanganana ara-barotra miaraka amin'ny fandaniana ara-barotra eran-tany miakatra 26% amin'ity taona ity dia arahin'ny fiakarana 34% amin'ny 2022.
Ny fitsangatsanganana ara-barotra dia tratran'ny COVID-19 ary niadana kokoa ny fiverenana.
Zava-dehibe ny fiaraha-miasan'ny mpiara-miombon'antoka rehetra mba hitadiavana vahaolana hanampiana amin'ny fanarenana ny dia.
Tokony hanitsy ny maodely fidiram-bolany ny orinasam-pitaterana ara-barotra, hanitatra ny fifantohana ara-jeografika ary hanatsara ny serivisy nomerika.
Ny fandaniam-bolan'ny fitsangatsanganana eran'izao tontolo izao dia toa hiakatra mihoatra ny ampahefatry ny taona amin'ity taona ity ary hahatratra ny roa ampahatelon'ny ambaratonga alohan'ny areti-mifindra amin'ny 2022, araka ny filazan'ny World Travel & Tourism Council (WTTC).
Ny vinavina dia tonga amin'ny tatitra WTTC vaovao lehibe miaraka amin'ny McKinsey & Company antsoina hoe 'Adapting to Endemic Covid-19: The Outlook for Business Travel'.
Izy io dia misarika amin'ny fikarohana, famakafakana ary dinidinika lalina miaraka amin'ireo mpitarika orinasa Travel & Tourism mba ahafahan'ny fikambanana miomana amin'ny fitsangatsanganana orinasa amin'ny tontolon'ny areti-mifindra.
Ny fitsangatsanganana ara-barotra dia tratran'ny COVID-19 ary niadana kokoa ny fiverenana. Koa satria zava-dehibe ho an'ny sehatra maro amin'ny toekarena manerantany ny fitsangatsanganana ara-barotra, dia zava-dehibe ny fiarahan'ny mpiara-miombon'antoka rehetra mba hitady vahaolana hanampiana ny fanarenana azy.
Saingy izany dia taorian'ny fianjeran'ny 61% tamin'ny fandaniana fitsangatsanganana ara-barotra tamin'ny taona 2020, taorian'ny fametrahana ny fameperana fitsangatsanganana midadasika miaraka amin'ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny faritra amin'ny fiverenana manerana an'izao tontolo izao.
Mba hanafainganana ny famerenana amin'ny laoniny ny fitsangatsanganana ara-barotra, ny tatitra dia manoro hevitra ny orinasa hanitsy ny maodely fidiram-bolany, hanitatra ny fifantohana ara-jeografika ary hanatsara ny serivisy nomerika.
Ny fanamby iombonana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fitsangatsanganana ara-barotra dia hiankina amin'ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa mitohy manerana ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ary ny fikolokoloana fifandraisana vaovao.
Julia Simpson, Tale Jeneralin'ny WTTC & Filoha, dia nilaza hoe: “Manomboka mihamitombo ny fitsangatsanganana ara-barotra. Manantena izahay fa hiverina ny roa ampahatelony amin'ny faran'ny taona 2022.
"Ny fitsangatsanganana ara-barotra dia voa mafy fa ny fikarohana ataonay dia mampiseho toerana ho an'ny fanantenana miaraka amin'i Azia Pasifika sy Afovoany Atsinanana amin'ny voalohany."
Raha jerena amin'ity taona ity sy amin'ny manaraka, WTTC Ny angon-drakitra dia mampiseho izay faritra manerana an'izao tontolo izao mitarika ny fifohazana amin'ny fitsangatsanganana ara-barotra, tarihin'ny Afovoany Atsinanana:
Afovoany Atsinanana - Ny fandaniana amin'ny raharaham-barotra dia napetraka hiakatra 49% amin'ity taona ity, matanjaka noho ny fandaniana fialamboly amin'ny 36%, arahin'ny fiakarana 32% amin'ny taona manaraka
Azia-Pasifika - Ny fandaniana amin'ny raharaham-barotra dia voatendry hiakatra 32% amin'ity taona ity, ary 41% amin'ny taona manaraka
Eoropeana - Miakatra 36% amin'ity taona ity, matanjaka kokoa noho ny fandaniana fialamboly amin'ny 26%, arahin'ny fiakarana 28% amin'ny taona manaraka
Afrika – Hiakatra 36% ny fandaniana amin’ity taona ity, somary matanjaka kokoa noho ny fandaniana amin’ny fialam-boly amin’ny 35%, arahin’ny fiakarana 23% amin’ny taona manaraka.
Amerika - Ny fandaniana ara-barotra dia antenaina hiakatra 14% amin'ity taona ity, ary 35% amin'ny 2022.
Ny tatitra dia manazava ny fomba nihena be ny fandaniana mifandraika amin'ny fitsangatsanganana eran-tany nanomboka tamin'ny 2019 ka hatramin'ny 2020, vokatry ny COVID-19 sy ny fameperana mitohy amin'ny fivezivezena iraisam-pirenena.
Tamin'ny taon-dasa, ny sehatry ny Travel & Tourism dia niharan'ny fatiantoka efa ho 4.5 trillion dolara amerikana, ary olona maherin'ny 62 tapitrisa no very asa. Nihena 45 isan-jato ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika an-trano, raha nihena 69.4% ny fandaniana vahiny iraisam-pirenena.
Ny tatitry ny WTTC koa dia mampiseho fiovana lehibe tao anatin'ny 18 volana, indrindra eo amin'ny fangatahana, ny famatsiana ary ny tontolo iasàna ankapobeny izay misy fiantraikany amin'ny fitsangatsanganana ara-barotra.
Ny fitakiana fitsangatsanganana ara-barotra dia miadana kokoa noho ny fialam-boly ary ny politikan'ny orinasa dia mbola misy fiantraikany amin'ny fitakiana fitsangatsanganana ara-barotra araka ny famerana ny diam-pirenena.
Ny areti-mifindra COVID-19 dia niteraka fiovana ihany koa, nitarika ny fifindran'ny nomerika ary noho izany dia nanova ny famatsiana ho an'ny fitsangatsanganana ara-barotra mety ho lasa fomba vaovao ny hetsika hybrid.
Lasa manjavozavo kokoa ihany koa ny tontolo iasana miaraka amin'ny filana mazava kokoa momba ny fitsipika sy fitsipika ilaina mba hamelana ny dia iraisam-pirenena tsy misy sakana.
Na izany aza, ny sehatra sasany dia nitombo tsara kokoa noho ny hafa niaraka tamin'ny rebounders tany am-boalohany, anisan'izany ny orinasa mpamokatra, pharmaceutical, ary orinasa mpanao fanorenana raha toa kosa ny indostria miompana amin'ny serivisy sy ny fahalalana ao anatin'izany ny fikarakarana ara-pahasalamana, ny fanabeazana ary ny serivisy matihanina dia mety hikorontana maharitra.
Ny tatitra dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fivezivezena ara-barotra sy ny fandaniana azony ho an'ny fitomboana ara-toekarena manerantany.
Ny fanadihadiana dia mampiseho fa tamin'ny taona 2019, ny ankamaroan'ny firenena lehibe dia niankin-doha tamin'ny fitsangatsanganana ara-barotra ho an'ny 20% amin'ny fizahantany, 75 ka hatramin'ny 85% amin'izy ireo dia an-trano.
Na dia tsy nahitana afa-tsy 21.4% amin'ny fitsangatsanganana eran-tany aza ny fitsangatsanganana ara-barotra tamin'ny taona 2019, dia izy no tompon'andraikitra amin'ny fandaniana ambony indrindra amin'ny toerana maro, ka mahatonga azy io ho tena ilaina amin'ny fanarenana ny sehatry ny fitsangatsanganana manontolo sy ho an'ireo mpandray anjara maro.
Ny fitsangatsanganana ara-barotra dia ampahany manan-danja amin'ny tolotra serivisy ho an'ny zotram-piaramanidina sy hotely avo lenta ary ilaina amin'ny famokarana betsaka amin'ny fidiram-bolany.
Talohan'ny valan'aretina, ny fitsangatsanganana ara-barotra dia nitentina manodidina ny 70% amin'ny fidiram-bolan'izao tontolo izao ho an'ny rojo hotely avo lenta raha eo anelanelan'ny 55 sy 75% ny tombom-barotra amin'ny zotram-piaramanidina dia avy amin'ny mpanao dia lavitra, izay mahatratra 12% ny mpandeha.
Jane Sun, Lehiben'ny Mpanatanteraka ao amin'ny Trip.com, dia nilaza hoe: "Any Shina, ny fitsangatsanganana ara-barotra dia miroborobo haingana. Ny orinasa Trip.com Group dia iray amin'ireo sehatra mitombo haingana indrindra, noho izany dia mbola mila mifankahita ny olona mba hitantana orinasa sy hanakatona ny fifanarahana. Mijanona ho matoky izahay fa rehefa miverina amin'ny laoniny ny orinasa dia manantena ny fitomboana matanjaka kokoa isika raha oharina amin'ny haavon'ny pre COVID. ”
Chris Nassetta, Filoha sy Tale Jeneralin'ny Hilton, dia nilaza hoe: "Ny fiverenana amin'ny fitsangatsanganana ara-barotra dia ho zava-dehibe amin'ny fanarenana ny indostriantsika amin'ny areti-mifindra.
“Mbola mahita fivoarana mitombo hatrany izahay ary asehon'ity tatitra ity ny maha zava-dehibe ny fitsangatsanganana ara-barotra amin'ny toekarena manerantany. Ny fitsangatsanganana sy ny fizahan-tany dia hanohy hitondra fandrosoana ho an'ny olona an-tapitrisany manerana izao tontolo izao - indrindra rehefa manomboka mandeha indray ny olona. ”
Mino ny WTTC fa na dia hiverina aza ny fitsangatsanganana ara-barotra, dia hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny sehatry ny Travel & Tourism eran-tany ny fanarenana azy, ka mahatonga ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana ho zava-dehibe kokoa amin'ny volana sy taona ho avy.